တောမီးကြောင့် ချင်းပြည်နယ်တွင် လူ ၁၄ ဦး သေဆုံး |
ချင်းနိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ပြီ »
တောမီးကြောင့် ချင်းပြည်နယ်တွင် လူ ၁၄ ဦး သေဆုံး
၈ ဧပြီ ၂၀၁၀: ချင်းပြည်နယ်အထက်ပိုင်း တွန်းဇံမြို.နယ်ခွဲ ကျီခါးမြို.နယ်တွင် မတ်လ ၂၆ ရက်နေ.က တောမီးရှို.ရာက တဆင့် လူ ၁၄ ဦးသေဆုံး သွားခဲ့ သည်ဟုကျီးခါးမြို.ဒေသခံများ၏ ပြောပြပါချက်အရ သိရသည်။
အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ဘက်တွင်တည်ရှိသည့် ကျီခါးမြို.နယ် Suangdem ကျေးရွာသား ၂၀ ခန်.တို. သည် မတ်လ ၂၆ ရက် နေ.က အမဲလိုက်ကြရာတွင် ပြင်ထန်သော တောမီး လောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ယခုကဲ့သို.သေဆုံးသွားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကျီခါးမြို.ခံတဦးက “ သူတို.ကနှစ်ဖွဲ.ခွဲပြီး တဖွဲ.က တောခြောက်တဲ့အနေနဲ. မီးရှို.တယ်…တဖွဲ.က သေနတ်နဲ. တိရိစ္ဆာန်တွေ ပြေးလာမည့်နေရာ ကစောင့်နေ ကြတယ် အဲဒီမှာ တောမီးကလည်း ပြင်းပြင်း ထန်ထန်လောင်နေ တယ်..မီးခိုးတွေ လည်း တအားထွက်တယ်လေ..တောကလည်းထူထပ်တယ်ဆိုတော့ အဲဒီ ၁၃ ယောက်က ထွက်ပြေး မရ ဖြစ်ပြီးမီးလောင် သေသွား ကြတယ်လို.ကြား ရတယ်”ဆိုပြီး ခိုနူမ်းထုန်ကို ပြောပြသည်။
ချင်းလူမျိူးများသည် ရှေးဘိုးဘွားစဉ်ဆက်ကတည်းကစပြီး အမဲလိုက်သည့် ၀ါသနာပါကြသူများဖြစ်ပြီး နွေရာသီ နှင့် ဆောင်းရာသီကာလများတွင် အမဲလိုက်ဝါသနာ ပါသူ များသည် တောလိုက်ရန် စိတ်ပြင်း ပြလာကြသည်။
အမဲလိုက်ရာတွင် တဖွဲ.က တောခြောက်သည့်အနေဖြင့် တောမီးရှို.လေ့ ရှိပြီး တောမီးမှလွတ်မြောက်ရန် ထွက်ပြေးလာကြ သည့် သားကောင်များကို အသင့် စောင့်နေကြသော မုဆိုးတွေ ကသေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ် လေ့ရှိသည်။
အလားတူ ကျီခါးမြို.နယ်အတွင်းရှိ Selbung ကျေးရွာတွင်လည်း တောမီးလောင် ကျွမ်းရာမှတဆင့် ရွာသားတဦး မတ်လ ၂၅ ရက်နေ.ကသေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု သိရ သည်။
“သူ.သူငယ်ချင်း ၅ ယောက်ကတော့တခြားတနေရာ ကိုထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ တယ်.. သူကျတော့ မီးထဲပါသွား တာပေါ့…ဒါနဲ.မီးငြိမ်း တဲ့အချိန်မှာ သူ.သူငယ်ချင်းတွေ က သွားကြည့် တော့ တကိုယ်လုံးမီးလောင်နေ တယ်၊ ဒါနဲ. မဏိပူရပြည်နယ် လမ်ကား ဆေး ရုံကိုသယ်လာကြတယ်… ဒါပေမဲ့အဲဒီညမှာ ဘဲသေသွားခဲ့ တယ်”ဟု လမ်ကားတွင်နေထိုင်သည့်ချင်းအမျိူးသားကိုသွမ်က ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်မတ်လအတွင်းမှာ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဟားခါး၊ ဖလမ်း၊ တီးတိန်၊ ကျီခါး၊ မတူပီ စသည့်မြို. နယ်များတွင် တောမီးလောင်ကျွမ်းရာမှတဆင့် လူနေအိမ်များ အမြောက်အများ လောင်ကျွမ်းပြာ ကျခဲ့ရပြီး ကျေးလက်ဒေသခံ များအိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။